Akụkọ - Ịgba mmiri mmiri nta mmiri ka mma karịa ndị na -efesa mmiri
Mmiri ịgba mmiri ọ ka mma karịa ndị na -efesa ya
Mmiri ịgba mmiri, ya bụ ịgba mmiri, bụ ụzọ ịgba mmiri mmiri nke na -eji ngwa ọrụ pụrụ iche iji fesa mmiri n'okpuru nrụgide n'ime ikuku, na -akpụpụta obere ụmụ irighiri mmiri, dị ka mmiri ozuzo, na -agbasasịkwa nke ọma na ala a na -akọ, na usoro ịgba mmiri ka elu. nye mmiri n'ubi ihe ubi.
Agbanyeghị, ịgba mmiri mmiri sprinkler nwekwara ụfọdụ adịghị ike: Ifufe na -emetụta ya nke ukwuu, a ga -efesakwa ụmụ irighiri mmiri mmiri agbasara ruo ogologo oge tupu ha adaa. Ifufe na -emetụta ọnọdụ ihu igwe ya nke ukwuu, nke na -agbanwe nkesa mmiri n'ụgbọ elu ma na -emetụta ịdị n'otu ịgba; Mgbe oke ikuku na -adị elu na iru mmiri ikuku dị ala, mfufu na udu mmiri ga -adị ukwuu, mgbe ụfọdụ ọbụna na -eru 10 % -30% nke mmiri mmiri.
Mmiri mmiri mmiri na -arụ ọrụ nke ukwuu n'ịgbanye otu lita mmiri anọ n'otu elekere n'otu ala. Uru nkentapu mmiri gafere sprinklers bụ na enwere obere mmiri na -efunahụ n'ihi uzucha ma ọ bụ nsị mmiri.
Mmiri mmiri mmiri bụ usoro ịgba mmiri mmiri kachasị arụ ọrụ nke ọma. Kama ịmịkọrọ elu ala niile, a na -etinye mmiri naanị na mpaghara mgbọrọgwụ osisi. Ebumnuche mbụ nke ntapu mmiri bụ itinye mmiri n'oge osisi kacha chọọ ya nke ọma yana ọnụego achọrọ maka ito eto nke ọma.
Enwere ike iji ogbugba mmiri mmiri n'ubi n'ọtụtụ ubi, ubi mkpụrụ osisi, griin haus, ala ubi, ubi wdg.
Tụlee ya na ụdị ịgba mmiri ndị ọzọ, enwere ọtụtụ uru ị ga -eji ịgba mmiri mmiri:
1. Ịchekwa mmiri, ịchekwa ume, ịchekwa fatịlaịza, ịchekwa ndị ọrụ, njikọta fatịlaịza dabara adaba, ọ bụ ezigbo ebe nkwado maka mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri dị elu na-enweghị mmetọ;
2. Jikwaa ọnọdụ okpomọkụ na iru mmiri dị elu iji belata mmebi ahụhụ;
3. Nọgidenụ na -enwe nhazi ala, gbochie nchikota ala, na -enwekwa mmetụta nke ịhapụ nnu;
4. Ihe ọkụkụ na -eto nke ọma, nha mkpụrụ ahụ dịkwa, mkpụrụ ya na -agakwa ahịa tupu oge eruo. Ihe mmepụta ahụ abawanyela karịa 35%, mụbara ego ndị ọrụ ugbo na -akpata.